Tsiambaratelo momba ny fitorahana bilaogy ny làlana mankany amin'ny fidiram-bola enina
Talata, Aprily 8, 2008 Zoma, Febroary 12, 2016 Douglas Karr
Nanomboka ny bokiko taloha kelin'izay, fantatro fa sarotra ny mitazona bilaogy ary mandamina izay rehetra nianarako momba ny fitorahana bilaogy sy ny media sosialy ho famoahana tokana sy mirindra.
Toa izany Darren Rowse an'ny Problogger nanao izany ihany, na izany aza. Nijery ny bilaogin'i Darren nesorina aho ary ho hitanao ny fikirizany sy ny fahazavan'ny fahitana fa niova ho loharanom-pahalalana mahafinaritra ho an'ireo bilaogera i Darren. Problogger dia ao amin'ny lisitry ny fahana 'tsy maintsy vakiako' ary tsy ampy ny fireharehana sy ny fireharehana Shoemoney ary John Chow (be fitiavana an'ireo bandy ireo,…… mamaky ny bilaogin'izy ireo koa aho!).
Ity misy topy kely iray amin'ny boky avy any Amazon:
Nanjary fialamboly malaza sy mahaliana ho an'ny maro ny fanaovana bilaogy, saingy mihamaro ny mpamaham-bolongana mahita azy io koa mety ho loharanom-bola mivantana na ankolaka. Na dia ambany aza ny sakana amin'ny fananganana bilaogy, raha tsy misy fitarihan'ny manam-pahaizana dia mora sosotra raha tsy mifanaraka amin'ny andrasana ny fahombiazana. Nosoratan'ny mpamorona ny loharano # 1 manerantany ho an'ny fitadiavam-bola amin'ny bilaogy, ProBlogger dia mitondra ny mpamaky hatramin'ny vao manomboka ka hatramin'ny mahazo vola na vokatry ny fitorahana bilaogy. Amin'ny alalàn'ny lesona azo ampiharina tsipiriany dia hisafidy lohahevitra bilaogy ny mpamaky, hamakafaka ny tsena, hanangana bilaogy, hampiroborobo izany ary hahazo karama.
Miarahaba an'i Darren sy Chris amin'ity toko vaovao amin'ny tantaran'ny Problogger! Ao amin'ny lisitry ny faniriako io!
Tags: bokydarren ruiuiproblogger
Eventbrite: Hetsika Tena Natao Mora
Apr 8, 2008 amin'ny 10: 41 AM
Douglas, misaotra betsaka anao nanonona ny boky ProBlogger. Tena nahafinaritra ny niara-niasa tamin'i Darren sy i Chris, ary efa eo am-pandrosoana ilay boky izao.
Ka inona ny karazana boky soratanao?
Apr 8, 2008 amin'ny 10: 58 AM
Nahazo boky pejy 40 - 50 aho nanomboka ny fomba fampiharana bilaogy amin'ny fampiasana fanao tsara indrindra amin'ny fametrahana ny motera fikarohana, ny famakiana ary ny paikady. Tsy nokasihiko akory izy io tato ho ato raha ny marina!
Apr 8, 2008 ao amin'ny 4: PM PM
misaotra tamin'ny fanonona Douglas - mankasitraka azy.
Apr 10, 2008 amin'ny 8: 26 AM
Miloka ianao, Darren! Miarahaba anao amin'ny fahombiazanao tsara!